ညဘက်ရောက်မှာကိုစိတ်ပူ နေရတဲ့ပြည်သူတွေကို မြတ်စွာဘုရားရှင်အား တိုင်တည်ပြီး အေးချမ်းဖို့ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ သက်မွန်မြင့် – Cele Snap
ညဘက်ရောက်မှာကိုစိတ်ပူ နေရတဲ့ပြည်သူတွေကို မြတ်စွာဘုရားရှင်အား တိုင်တည်ပြီး အေးချမ်းဖို့ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ သက်မွန်မြင့်
အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်ကတော့ ချင်းတိုင်းရင်သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာ လေး ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သက်မွန်မြင့်က အနုပညာလောကထဲကို တစ်ခေတ်တစ်ခါ က တည်း က ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီးဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်က ယနေ့အချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်လုပ် ဆောင်နေဆဲ ဖြစ် ပြီး ပြည်သူ့ အချစ်တော်လေးတစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာ လမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ ရပ်တည် နေ တာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။
လတ်တလော ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် သက်မွန်က ချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင် မောင်နှမ တွေ နဲ့အတူတစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါ တယ်နော်။ သက်မွန်ကိုယ်တိုင်လည်း နေပူကြီးထဲမှာပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။သက်မွန်က နေ့ဘက် မှာလည်းမပင်မပန်း ဘဲ လှုပ်ရှားခဲ့ရပြီး ညဘက်ရောက်တဲ့ အခါမှာ တော့ ရင်ထိတ်နေရတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားမျှ ဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
သက်မွန်မြင့်ကတော့”အရှင်ဘုရား! ည အမှောင်ရောက်ရင် မကောင်းတာ မဟုတ်တာ မလုပ်တဲ့ ပြည်သူ တွေ ရင်ထိတ်ရတဲ့ အချိန် ရောက်ပါပြီ ဘုရား အရှင်ဘုရား သာ အားကိုး ရာပါ၊ ပြည်သူ တွေ နိုင်ငံ့သူရဲကောင်းတွေ ဘေးကင်းရေး၊မတရား မခံရရေး စောင့်ရှောက်ပေးပါဘုရား”ဆိုကာ မြတ်စွာဘုရား ကိုသာ အားကိုးပြီး တိုင်တည် နေတာဖြစ် ပါတယ်နော်။သက်မွန် ကလည်း ကိုယ် တတ် နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ နေ့ညမပြတ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်လို့ ပြည်သူအတွက်အားတက်စ ရာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source&Photo Credit:Thet Mon Myint’s Facebook Pag
အကယျဒမီသကျမှနျမွငျ့ကတော့ ခငျြးတိုငျးရငျသူလေးတဈယောကျဖွဈပွီး အေးခမျြးတဲ့မကျြနှာ လေး ကိုပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။သကျမှနျမွငျ့က အနုပညာလောကထဲကို တဈခတျေတဈခါ က တညျး က ဝငျရောကျ ခဲ့ပွီးဇာတျကား ပေါငျးမြားစှာမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျက ယနအေ့ခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ဖွညျးဖွညျး မှနျမှနျလုပျ ဆောငျနဆေဲ ဖွဈ ပွီး ပွညျသူ့ အခဈြတျောလေးတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာ လမျးကွောငျး ပျေါမှာ ရပျတညျ နေ တာ ဖွဈပါ တယျနျော။
လတျတလော ဖွဈပျေါ နတေဲ့အခွအေနမှောဆိုရငျ သကျမှနျက ခဈြရတဲ့ အနုပညာရှငျ မောငျနှမ တှေ နဲ့အတူတဈစိတျတဈဝမျးတညျး ပါဝငျလှုပျရှားနတော ဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျတို့ ဇနီးမောငျနှံ ကတော့ ကလေးတှရေဲ့အနာဂတျအတှကျ လမျးပျေါထှကျပွီးရငျဆိုငျနကွေတာဖွဈပါ တယျနျော။ သကျမှနျကိုယျတိုငျလညျး နပေူကွီးထဲမှာပွညျသူလူထုနဲ့အတူရပျတညျပွီး လကျရှိအခွအေနကေို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ကွိုးစားနတောဖွဈပါတယျ။သကျမှနျက နဘေ့ကျ မှာလညျးမပငျမပနျး ဘဲ လှုပျရှားခဲ့ရပွီး ညဘကျရောကျတဲ့ အခါမှာ တော့ ရငျထိတျနရေတဲ့အကွောငျးကို ရေးသားမြှ ဝလောတာဖွဈပါတယျနျော။
သကျမှနျမွငျ့ကတော့”အရှငျဘုရား! ည အမှောငျရောကျရငျ မကောငျးတာ မဟုတျတာ မလုပျတဲ့ ပွညျသူ တှေ ရငျထိတျရတဲ့ အခြိနျ ရောကျပါပွီ ဘုရား အရှငျဘုရား သာ အားကိုး ရာပါ၊ ပွညျသူ တှေ နိုငျငံ့သူရဲကောငျးတှေ ဘေးကငျးရေး၊မတရား မခံရရေး စောငျ့ရှောကျပေးပါဘုရား”ဆိုကာ မွတျစှာဘုရား ကိုသာ အားကိုးပွီး တိုငျတညျ နတောဖွဈ ပါတယျနျော။သကျမှနျ ကလညျး ကိုယျ တတျ နိုငျတဲ့ ဘကျကနေ နညေ့မပွတျဆောငျရှကျနတောဖွဈလို့ ပွညျသူအတှကျအားတကျစ ရာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Blue Mark ရထားတဲ့ Page ကိုတော့ ဖျက်ဆီးလို့ရပေမယ့် ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဖျက်ဆီးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ နေတိုး……